हो, म ‘आलुजस्तै गायक...’
न मेरी आमाले स्कुल देखेको।
न मेरो बाबाले गीत लेखेको।
काँबाट सिक्नु खै मैले सुरताल।
‘आलु जस्तो गायक’ अर्थात दुर्गेश थापाको गीत हो यो।
यो गीत रिलिज भएको तीन दिन भयो।
नेपालमा यो गीत लगातार युट्युवको पहिलो ट्रेन्डिङमै छ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म ‘आलु जस्तो गायक’ लाई लाई १० लाख ४६ हजार ७ सय ५१ पटक हेरिएको छ। यस्तै ७ हजार ३ सय ३५ कमेन्ट आएका छन्।
गायक दुर्गेशले गीतमा आफूलाई ‘आलु’ का रूपमा विम्बित गरेका छन्।
आलु अर्थात् बहुगुणी तरकारी। जेमा पनि फिट भइदिने।
दुर्गेशको सवालमा चाहे त्यो मोडलिङ होस् या गायन नै किन नहोस्।
गीत सुन्दा लाग्छ उनले आफूलाई बहुगुणी आलुको रूपमा व्याख्या गर्न खोजेका छन्।
उनी केही दिन पहिले पत्रकार ऋषि धामलाले लिएको अन्तर्वार्तामा केही अग्रज गायकका गीतको सुरताल मिलाउन नसकेर ट्रोलको सिकार बनेका थिए।
विवादित बनेपछि उनको मनमा धेरै कुरा खेलिरहेका हुँदा हुन्। उनले त्यो बीचमा कतै कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
बस एक गीत बजारमा ल्याए ‘आलु जस्तो गायक’।
यसैको माध्यमबाट उनले सबैलाई जवाफ दिएका छन्।
गीतमा उनले आफू सामान्य परिवारबाट आएको बताएका छन्।
के विभिन्न टिकाटिप्पणीबाट दुर्गेशको साँच्चै चित्त दुखेको हो त? एउटा चर्चित सेलिब्रिटी टिकाटिप्पणीसँग किन यति आक्रोशित?
आयोमेलले यसको उत्तर दुर्गेशबाट नै खोजेको छ।
दुर्गेश भन्छन्, ‘म आफूलाई गायक भन्न पनि रुचाउँदिनँ। गायक बन्ने रहर थियो। त्यो रहर पूरा गर्नमात्रै मैले गीत निकालेर दर्शकलाई रमाइलो प्रदान गरिरहेको हुन्छु।’
उनी आफूलाई अडियन्सले नै गायक बनाइदिएको ठान्छन्। आफ्नो गायकी, पर्फर्मेन्स र जमात फरक भएकाले आफूले नारायणगोपाल, भक्तराजका गीत गाउन नसक्ने उनी आफैं बताउँछन्।
तर, मोडलिङमा भने आफूलाई अब्बल नै ठान्छन् उनी। उनले मोडलिङका लागि धेरै संघर्ष गरेका पनि बताए।
‘मैले गीतका क्षेत्रमा सुरताल केही सिकेको छैन। जति सिकेको छु मेरो वातावरणबाट मात्रै सिकेको हो’, उनले भने, ‘ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्तापछि उठेका प्रश्नको उत्तर मैले यसै गीतबाट दिन खोजेको हो।’
उनी आफूले मिडियामा इन्टरभ्यु दिँदा त्यो धेरैले हेर्न नसक्ने र आफ्नोबारेमा बुझ्ने मौका नपाउने भएकाले गीतैबाट जवाफ दिएको बताउँछन्।
‘मैले त्यतिबेला मेरा अग्रजप्रति मेरो सम्मान छ। म गाउन सक्दिनँ भन्दा ममाथि अर्को प्रश्न उठ्यो। दुर्गेश थापा गायक भएर अग्रजका गीत नगाउने? अपहेलना गर्ने? भन्थे’, उनले भने, ‘त्यसैले मलाई ढोँगी बन्नु थिएन। आफूभित्र जे छ त्यही देखाउनु थियो। त्यसैले मैले मलाई जति आउँथ्यो त्यति गाएँ।’
मैले बेस्ट मोडलमा १५/१६ वटा अवार्ड जितेको छु। त्यसैले म गायक कम मोडल बढी हो।
दुर्गेश आफ्नो विगत सम्झिँदै भन्छन्, ‘म बाग्लुङ गल्कोट मल्मामा जन्मिएको मान्छे। थुप्रै सपना बोकेर राजधानी छिरेको थिएँ। स्कूले जीवनमा बिहान एक भारी घाँस काटेर स्कुल जान्थ्यौं हामी। काँबाट सुरताल सिक्न पाउनु?’
उनले आफूसँग ठूलो संघर्षमय जीवन भएको बताए।
‘मेरी आमाले गीत लेख्नु भएन। मेरो बुबा जागिरको सिलसिलामा इन्डियन आर्मीमा जानुभयो’, उनले भने, ‘हाम्रो घरमा सांगीतिक माहोल थिएन। तर, पनि मैले संघर्ष गरेँ। र, आज यो स्थानमा छु।
‘मसँग गाउँमा खेतिपाती गरेको अनुभव छ। अर्मपर्म गरेको अनुभव छ। म अहिले गीतमा गाउँदा ती दुःखलाई पनि उठाउने गर्छु,’ उनले भने।
ट्रोल बन्दा नकारात्मकरूपमा नभई आफूले उर्जाको रूपमा लिएको बताउँछन् उनी। ट्रोल नभएको भए ‘आलु जस्तो गायक’ को जन्म नहुने उनले बताए।
‘क्वारेन्टाइनमा पिपासुले बलात्कार गर्‍याे, मरेपछि कोरोनाको रिपोर्ट आउँछ, यस्तो किन सरकार भन्दै राज्यसँग जिम्मेवार नागरिकको हैसियले सवाल गरिरहेको हुन्छु’, उनले भने, 'तर, केही फरकपन र नयाँपनका बारेमा भने प्रत्येक गीतमा सोच्ने गरेको छु।'
कहिलेकाहीँ राम्रो गर्दागर्दै पनि ट्रोलको सिकार हुँदा आत्तिहाल्नु नपर्ने ठान्छन् उनी।
गत वर्ष तिहारमा उनले एउटा गीत गाए, ‘ह्याप्पी तिहार, चिसो बियर...’ यो गीतको पनि खुबै आलोचना भयो।
त्यसका लागि अहिले उनी आत्मग्लानि गरिरहेका छन्। त्यो अञ्जानमा गल्ती भएको उनले बताए।
उनले आफूलाई आकाशमा नभई भुइँमै हेर्ने मान्छे भएको बताउँछन्।
‘अरू त म बिन्दास मान्छे हो। कहिले कसैको कुभलो चिताउँदिन र आत्ति पनि हाल्दिनँ। ट्रोलको सिकार बन्दा केही सोचमग्न भने बनायो’, उनले भने।